Inflated Seal Masuo
Mechanical Seal Masuo
Bio-chengetedzo Pass Box
Patient Room Masuo
Operation Room Masuo
X-ray Room Masuo
CT Room Masuo
PET & CT Masuo
Kutungamirira Glass Windows
Kutungamirira Lined Masuo
Lead Apron wokuisira
X-ray firimu Fafitera
X-ray chakarurama chiedza
Iri Ningbo, guta rakanaka chengarava riri South East China, Golden Door Zvigadzirwa zvava specialized pakupa musuo mhinduro mishonga, zvipatara, zvenyukireya maindasitiri uye Refrigeration Mazinga kubva 2009. Tine makore gumi ruzivo mazano uye mukugadzira mhando akasiyana nemikova Pharmaceuticals, biosafety mumarabhoritari, mashandiro makamuri, X-ray dzimba, CT makamuri, PET / CT makamuri, MRI makamuri, dzakachena makamuri, kutonhora dzimba uye zvenyukireya mafomu.
Pamberi basa pokutangira, chikwata chedu inowanika ungakubatsira kusarudza mikova zvakakodzera sezvo paavhareji mafomu siyana. We kugadzira, gadzira, uye dzishandise mikova yedu kwamuri. We anopa wose upenyu pashure okutengesa basa mikova dzedu.
Mumakore gumi adarika, zviuru masuo edu kuiswa dzakasiyana mabasa munyika yose uye vave kugamuchirwa zvakanaka nokuda musika. Tine nguva refu mabhizimisi vadyidzani muAustralia, Middle Africa, South Africa, Middle East uye South Asia. Makambani More uye zvakawanda makasimbisa refu bhizimisi ukama nesu nokuda kwedu yakavimbika zvinhu uye mabasa.
Golden Door kwete chete inopa mikova, asi anopa mamwe kufanana zvinhu nokuda kwedu nemakasitoma sezvo kukosha akawedzera chimwe-kumira basa. Nemhaka redu kwenguva refu mabhizimisi vadiwa, tine zvakawanda souring ruzivo uye kubatsira vatengi yedu basa kukosha.
Golden Door Team achava nguva dzose pano kuti ape musuo kugadzirisa zvakanaka uye kufanana nhumbi muzvirongwa zvako.
nhau Good kubva kunze